Fanohanana - Huizhou Minjie Technology Co., Ltd.
1.1 Fampiharana BARCODE SCANNERS
Inona avy ireo faritra fampiharana ny scanner barcode?Ny hevitra voalohany mipoitra ao an-tsain'ny olona maro dia ny toeram-pivarotana lehibe na toeram-pivarotana!Saingy tsy toy izany raha ny marina.Ampiasaina amin'ny sehatra maro izy io.
1. Fitaovana enti-tanana (boaty barcode scanner, basy barcode scanner, PDA, sns.)
2. Toeram-pivarotana, POS terminal, ho an'ny fandoavam-bola an-tserasera, WeChat Alipay scanning.
3. Tablet PC, fitantanana entana trano fanatobiana entana, entana antsinjarany.
4. Ampiasaina matetika amin'ny trano fanatobiana entana sy trano fanatobiana entana.
5. Terminal manokana, serivisy manokana, modules code scanning napetaka
6. Kabinetra marani-tsaina (logistika, kabinetra entana, sns…)
7.O2O terminal, ampiasaina amin'ny scanning code fandoavam-bola, elektronika mpikambana, tselatra faktiora, sns
8.Passport, kara-panondro, fahazoan-dàlana mamily, karatra maha-mpikambana, kara-panondro ary antontan-taratasy hafa fisoratana anarana sy fampidirana mandeha ho azy, mamaky teny an-dalana, manatsara ny fitantanana.
1.2 Fampiharana MPANONTA TRANOMANA
Ny mpanonta thermal dia nampiasaina betsaka tamin'ny rafitra POS terminal, rafitra banky, fitaovana ara-pitsaboana, Varotra fitsangatsanganana, Livraison/Transportation Slip, Ticketing, Logistics, Restaurant / Hotel, Business Retail, metatra taxi, Barcode, Warehousing & Distribution, Firaketana an-tsoratra lavitra, fandraisana vahiny , Parking, Faktiora faktiora, Varotra sy serivisy eny an-tsaha, Fitantanana ara-pitaovana ary sehatra hafa.
1.3 Fampiharana POS TERMINAL
Mety amin'ny toeram-pivarotana lehibe sy salantsalany, fivarotana rojo, hypermarket, trano fisakafoanana lehibe sy antonony ary orinasa antsinjarany rehetra manana fitantanana avo lenta.Afaka miteny.Afaka mifandray amin'ny periferika isan-karazany toy ny basy scanner sy ny mpanonta.
© Copyright - 2010-2021 : Zo rehetra voatokana. Vokatra asongadina, Sitemap, QR Code Barcode Scanner, Barcode Scanner mora, Barcode Scanner, QR Code Reader Barcode Scanner, Scanner Barcode tanana, China Barcode Scanner, Ny vokatra rehetra